Iyo nyowani MacBook 12 "iri pakati pe5% ne18% nekukurumidza | iPhone News
Iyo MacBook 12 ″ nyowani iri pakati pe5% ne18% nekukurumidza
Sezvaunoziva, Apple nemaune uye nekunyengera yakavandudza yayo 12-inch MacBook, chimwe chinhu icho vazhinji vedu taitarisira, kunyange tichifanira kutaura kuti taifunga kuti chichava chinhu chitsva zvishoma. Zvisinei, zvikamu zvekutanga zvakatengwa nevashandisi zvakatotanga kusvika kudzimba dzevaridzi uye nekutanga kuendesa, "mabhenji" ekutanga haangashaikwe kana, iwo maitiro ekuongorora atinowanzoona munguva pfupi yapfuura nechinhu chimwe nechimwe chitsva. Apple kana mamwe mabhureki sekureba sekunge ivo vari kutungamira, nzira yekuenzanisa iyo mbishi simba rechinhu chitsva neyekare. Mune mabenchmarks ayo ari kuratidza iyo nyowani MacBooks 12 ″ isu tinowana simba rinosvika 18% rakakwira neiyo nyowani nyowani processors.
Kubva pane ongororo, Intel's Skylake M processor machipisi, akavharirwa pa1.1 GHz chete, tinoona kuti inoratidza pakati pe5% ne10% yakareruka kupfuura iyo MacBook 12 ″ yakaburitswa muna 2015, zvichangopfuura, asi Isu tatoziva kuti Apple inoshandiswa zvishoma kumutsiridza malaptop ayo gore rega kana gore nehafu. Muchiitiko cheSkylake M5 tinowana zvibodzwa kubva pa2.497 kusvika ku4.994 yemhando nyowani, ndiko kuti, 18% ine simba rakanyanya kupfuura yakaenzana mushanduro yapfuura, yaive neiyi wachi yekumhanya zvakangofanana muna 2015, ye1.2 GHz, asi inoita kunge isingaite sezvinoita.
Intel irikuita basa rakanaka nemaSkylakes uye Apple yakazviziva. Chekupedzisira, mune iyo Intel Core M7 tinowana mamakisi e3001 mune yegore rapfuura modhi, nepo mune ino yegore modhi inosvika 6707, 17% nekukurumidza kupfuura iyo yapfuura modhi. Hatizive kana ichiruramisa kutenga kwayo kana kuti kwete, asi mitengo haina kuchinja uye zvakare yave neRose Goridhe modhi modhi, zvishoma zvimwe zvinogona kubvunzwa nezvechinhu chisina mafeni uye chiri chakareruka pamusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Iyo MacBook 12 ″ nyowani iri pakati pe5% ne18% nekukurumidza
Pegatron inobvumira vatapi venhau kushanyira iyo iPhone chirimwa kekutanga